ဟိုရိုက် ဒီရိုက် ဘန်ကောက်၌ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Buddhism » ဟိုရိုက် ဒီရိုက် ဘန်ကောက်၌
ဟိုရိုက် ဒီရိုက် ဘန်ကောက်၌
Posted by koyin sithu on Jun 3, 2012 in Buddhism, Photography, Travel | 25 comments
မြဘုရားအနီးတွင် သီတင်းသုံးစံပယ်နေသော အတုမရှိ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား
အရဟံ - ပူဇော်မှုကိုလည်း အထူးခံယူထိုက်တောမှုပါသည်။
ထီးတော်မပါသော်လည်း ရွှေရောင်အဆင်းဖြင့် တင့်တယ်လှသော စေတီတော်
ဘုရားရှင်တော်ပလ္လင်တော်ရှေ့ ဖူးမြော်အပြီး တရားထိုင်ဖို့ အာရုံယူနေသူ ကိုရင်တစ်ယောက်
ထိုင်းဘုရင့်တပ်မတော် ဘုရင်ကြီးအား အလေးပြုရန် စစ်ရေးပြချီတက်ပုံ
ဘုရင့်မြင်းတပ် စစ်ရေးပြရန် ချီတက်လာနေပုံ
ထိုင်းဘုရင်ကြီး၏ အစ်ကိုတော် ရုပ်ထုကြီး
ခုတလော စာရေးဖို့ အာရုံစိုက်လိုက်တိုင်း စာရေးမရဖြစ်နေပါဒလယ်..
ပို့စ်တင်ချင်နေတာနဲ့ ဘန်ကောက်ရောက်တုန်းက ဘုရားကျောင်းကန်သွားရင်း
ရိုက်ခဲ့တဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို ဟိုရိုက်ဒီရိုက် လာခဲ့ပါတယ်။
ဘန်ကောက်မှာ ဆင်စီးရင်း ညပိုင်း လျှောက်လည်ခဲ့တဲ့နေရာတွေနဲ့
အလောင်းမင်းတရားကြီး ထုံးကို နှလုံးမူရင်း ကိုရင်နဲ့ ဇင်းမယ်သူလေးတွေ တွဲရိုက်ထားတဲ့ ပုံတွေတော့ မတင်တော့ပါဘူးနော့…
ရွာရဲ့ ဆင်ဆာမိသွားမှာ စိုးလို့ရယ်ပါ…. အဟီးး.. :cool: :cool:
ဘန်ကောက်မှ ရေချိုးခဲ့တယ် မို့ လား
ညစ်တီးညစ်ပတ်တော့ မနေခဲ့လောက်ဘူး မို့ လား…
ကျုပ်တို့ ရွာက လပျိုကြီးတွေအတွက်
ပြန်ပြီး ဝေမျှရင် မကောင်းဘူးလော ။
နေ၀ူး.. နေ၀ူး… ရေလည်း ပုံမှန်ချိုးဒယ်.. ဂျီးလည်း ပုံမှန်တိုက်ဒယ်…
ရောက်တုန်းရောက်ခိုက်လေး ခရီးပန်းလာတယ် မဟုတ်ရား…
ရွာထဲက ကိုပေတို့ အူးဗိုက်၊ အူးကမ်း၊ အူးဂီ့တို့ ကာလသားတစ်သိုက်
နဲ့ ရေချိုးလိုက်လို့ကတော့ ဇင်းမယ်သူ အတင်းယူမယ် အခု
ဘုရားပုံတော် အတော်သပ္ပါတယ်ဗျို့.. သာဓု သာဓု သာဓု။ ဒါနဲ့ ထိုင်းလူမျိုးတွေ ဘုရားကို ရွှေသင်္ကန်းကပ်ရင် ရွှေဆိုင်းနဲ့လား ရွှေရောင်သင်္ဘောဆေးသင်္ကန်းနဲ့လား။
ပေးတဲ့ဆုနဲ့ တစ်လုံးမလွဲ ပြည့်ပါစေခင်ည…
အကျီအမဲ စပို့ရှပ်ဝတ်ထားတဲ့ နိုင်ငံခြားသူရဲ့လည်ပင်းက ဘာဖြစ်နေတာလဲ
ကိုရင်က ဘာလို့ရုပ်ကို ဖျက်ရတာလဲ
စကီလေးတွေရိုက်မလာလို့ အားကြီး စိတ်ဆိုးတယ်
အကြွေးရှင်တွေမြင်ရင် မှတ်မိမှာစိုးလို့ ;)
ဟုတ်ပါဘူး… မိုးရယ်.. ရုပ်လေးဖျက်ထားမိလိုက်တာ…
မိုးမြင်ရင် တစ်မျိုးမြင်မှာ စိုးလို့ရယ်ပါ..
စိုးတယ်.. စိုးမိတယ်… စိုးထိတ်မိတယ်… ;) ;) ;)
ကရင်စည်ပျောက်နေတာ …. အဲ့ဒီရောက်နေတာကြောင့်ကိုး … ။
ဘုရားလည်း ဖူး .. လိပ်ဥလည်း တူးခဲ့တဲ့ …. အတွေ့ ကြုံလေးတွေအကြောင်းလည်း စာရေးတင်ပါဦး ။
ဟိုရိုက် ဒီရိုက်ပြီးရင် ဟိုချိုးဒီနှိပ်၊ဟိုဆတ်ဒီဆတ်လေးတွေလဲ တင်ပေးပါအုံး
အဲဒီ နေရာ ရောက်တိုင်း အရမ်းနေပူလို့ ဘယ်နား က အရိပ်မှာ ပြေးပုန်းရမလဲ စဉ်းစားရတယ်။
နန်းတော်ထဲ ၀င်မယ်ဆိုရင် မိန်းမတွေ စကတ်အတိုနဲ့ မ၀င်ရဘူး ဘောင်းဘီတောင် တိုရင် လက်မခံဘူး။
စည်းကမ်း ထုတ်ထားတော့လည်း စည်းကမ်း ရှိကြတာပေါ့။ အရှည်နဲ့မှ ၀င်လို့ရတယ်။
မှတ်မှတ်ရရ တခါ သူများက သရီးကွာတား ၀တ်တဲ့ ဘောင်းဘီ ဖိုးကွာတား မကျ သရီးကွာတား မကျ အရပ်က ပေမမှီ ဒေါက်မမှီ နဲ့ မရှည်မတို ဆိုတော့ ဘောင်းဘီ တိုင်းတဲ့ တိုင်အမှတ်နဲ့ လက် ၂လုံး လောက်ပဲ ကွာလို့ အပေါက်စောင့်တဲ့ ယိုးဒယားကြီးက အင်း အင်း ဆိုပြီး ပေးဝင်ခိုင်းဖူးတယ်။
မြန်မာပြည်က ဘုရားတွေမှာ အတိုတွေ ၀တ်လိုက်ကြတာ အရမ်းပဲ နိုင်ငံခြားသားက ထမိန်ငှားပြီး ၀တ်ခိုင်းလို့ ထမိန်ငှားခလည်း ရတယ် တိုတိုလေးတွေလည်း မရှိဘူး။
အဆိုးဆုံးက မြန်မာတွေပဲ.. ရွှေတိဂုံ ဘုရားပေါ်မှာ အတို အပြတ် ဖင်ကျပ်တွေ နဲ့ မြင်နေရတယ်။
ပြုပြင်ဖို့တော့ သင့်ပြီ။ လှေကားထိပ်မှာ စစ်ဆေးရေး ထားပြီး အတိုအပြတ် နဲ့ဆို ပြန်သာ ဆင်းခိုင်း အဲလို လုပ်သင့်တယ်။ သူ့အပြစ်နဲ့ သူ မောပစေတော့..
သူများ ဖျက်လို့ ပျက်စီးတာ မဟုတ်ပဲ ကိုယ့်လူမျိုးတွေက ဖျက်လို့ ပျက်နေကြတာတွေ အများကြီးပဲ။
မစ္စတာ ဘင်း ကား ကြည့်ပြီး အဲဒီလို မတ်တပ်ကြီး ရပ်နေတဲ့ လူတွေကို တွေ့ရင် စချင်တယ်။
တာဝန်ချိန် ဘယ်လောက် မတ်တပ်ရပ်ရလဲတော့ မသိဘူး။ ရပ်နေတဲ့ အချိန် ငြိမ်နေတာပဲ အရုပ်လို.. မလေး မှာ နဲ့ တူတယ် မတ်တပ်ရပ်ပြီး ငြိမ်နေတဲ့ လူအရှေ့မှာ တယောက်တလှဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်တော့ ပြောချင်တဲ့ စကား ဟိုပြော ဒီပြောနဲ့ လုပ်နေတော့ အနောက်မှာ ရပ်နေတာ စပ်ဖြီးဖြီး နဲ့ မလှုပ်ပဲ ရီချင်နေတာ ဓါတ်ပုံထဲမှာ မှတ်တမ်းကြီး ပါလာတယ်။ အဲဒီ တုန်းက ရိုက်တဲ့ ဓါတ်ပုံ မြင်တိုင်း ရီချင်တယ်။
ရွာတော်ရှင်ဖွားဆူးရေ.. ၀င်ပေါက်မှာ ဖော်လိန်နာတွေဆို
၀င်ကြေးကောက်ခံပါတယ်။ တားတားကိုတော့ မွေ့ထိုင်းနဲ့
ဆင်နေလို့လား ရုပ်ချောနေလို့လားမသိဘူး ၀င်ကြေးမကောက်ပါဘူး…။ :cool:
အလကားဖရီး ရုပ်တည်နဲ့ ၀င်ခဲ့ပါတယ်… ဟီးး
တားကတော့ အဲ့စစ်သားကြီးတွေနဲ့ ရိုက်ချင်ဘူး…
ကိုစည်သူအားပေးသွားပါတယ် ဒါ့ပုံတွေ နိုင်ငံခြားမပြောနဲ့ မြန်မာပြည်တောင်အနှံ့မရောက်ဖူးတဲ့သူမို့ ဒီလိုပုံ တွေကို အားပေးနေလျှက်ပါ …..
ဘန်ကောက်ဆိုတော့ ကိုစည်သူများ ကာရာဘီမှာဘိလပ်မြေတင်တဲ့ သင်္ဘောပေါ်ပါသွားတာလားလို့ ……..
မသိပါဘူး။ ခုဘန်ကောက်ရောက်နေပြီမှတ်လို့ အော်တော့မလို့ သွားတာတောင် သံချောင်းမခေါက်ဘူးပြောမယ်ဆိုပြီး ၀င်လိုက်တာ။ ခုဘယ်မှာတုန်း ဘာတွေလုပ်နေတုန်း သွားပြီတောင်မှတ်တာ။ တစ်ခါမှမရောက်ဖူးတော့လည်း ကြည့်ရှုခံစားရတာပေါ့လေ….
ကိုရင် ရေချိုးတဲ့ ပုံတွေကြည့်ချင်ပါတယ်
အဲ ပြောရမှာတော့ အားနာတယ်
အသက်လေးရလာလို့ ပိုက်ဆံလေးများ စုမိရင် ဘန်ကောက်မှာပဲ
ကိုရင်နိုအသိဆုံးဖြစ်မှာပါ… ဟိဟီးး.. ;) ;)
ကိုရင် ဘုရားပုံက သပ္ပါယ်လိုက်တာ ။ ဒါနဲ့ ဟိုဒင်း ရွှေငါးတွေဘာတွေရော ဖမ်းခဲ့သေးလား ။ ဓာတ်ပုံလေးဘာလေးများ ရှိရင်လည်း ဗဟုသုတရအောင် တင်ပါအုန်းတော့လား ။
မကြီးပုခ်ျရေ… ရွှေငါးတော့ မဖမ်းဖြစ်ခဲ့ပါဘူး.. ဓါတ်ပုံတော့
ဒါပေမယ့်… ရှူခင်းတွေနဲ့အတူ ကျနော် မျက်နှာကြီးက
ဗဟုသုတရစရာကတော့ ယပလက် ကောင်မလေးတွေပုံတွေ
(ဒါပေမယ့်… ရှူခင်းတွေနဲ့အတူ ကျနော် မျက်နှာကြီးက
ရွာသူားတွေ သရဲ မကြောက်တတ်ကြပါဘူး။
မရုပ်ပါနဲ့ အန်တီမမရယ်… မွေးကတည်းက ကျပ်မပြည့်ပေမဲ့
ကိုရီးယားမင်းသားလေးနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်တူဒဲ့ ရုပ်ကို
မရှိတဲ့ သိက္ခာလေးတွေ ကျကုန်ပါဦးမယ်…
ခုတစ်လော ရွာထဲမှာ သွေးရဲရဲ သံရဲရဲ ပုံတွေ မြင်နေရဒါ…
You was in thailand!!